ဆေးဘဲဥကို ညှီနံ့မထွက်ဘဲ အရသာရှယ်ထွက်အောင် ကိုယ်တိုင်သုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း - For her Myanmar
ဆေးဘဲဥသုပ်ကို ဆိုင်မှာဝယ်မစားတော့မှာ ရဲရဲကြီးအာမခံတယ်
ဆေးဘဲဥသုပ်တော့ ကြိုက်ပါရဲ့ ကိုယ်တိုင်သုပ်စားတိုင်း ညှီနံ့ကြီးရရနေလို့ ဆိုင်ကပဲဝယ်စားနေရတုန်းလား?? ဆေးဘဲဥဆိုတာက နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်တာမို့ ဆိုင်မှာဝယ်စားရတာ တကယ်ကိုမတန်တာပါ
ကိုယ်တိုင်ညှီနံ့မရအောင် သုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးသိထားရင် ယောင်းတို့ခံတွင်းနဲ့ ကွက်တိကျတဲ့ အရသာကိုဖန်တီးနိုင်သလို ပိုက်ဆံသက်သက်သာသာနဲ့ အများကြီးစားနိုင်မှာလေ.. ဒီတော့ မင်မင်ကနေ ဆေးဘဲဥကို ညှီနံ့မထွက်စေဘဲ အရသာရှိရှိဘယ်လိုသုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းအဆင့်ဆင့်လေးကို ဝေမျှပေးသွားမယ်နော်။
Related article>>>ချက်ရ လွယ်ကူပြီး ထမင်းမြိန်စေမယ့် ဝက်နံရိုး ကြက်ဟင်းခါးသီး ဟင်းချိုချက်နည်း
ဆေးဘဲဥသုပ်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်မလဲဆိုရင်-
ဆေးဘဲဥသုပ်နည်းလေးကို မပြောသေးခင် ဆေးဘဲဥကောင်းကောင်းလေးရအောင် ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာလေး အရင်ကြည့်ကြည့်နော်… ပထမဆုံး ဆေးဘဲဥကိုကိုင်ပြီး ခေါက်ကြည့်လိုက်ပါ။ အထဲမှာ လှုပ်ခါမှုမရှိဘဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုမှ ယူပါ။ အထဲမှာ လှုပ်ခါနေတာမျိုးဆို အထဲကအနှစ်တွေက မခဲသေးတာမို့ ဥကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါ အနှစ်အရည်တွေထွက်ကျလာပြီး စားရတာပိုညှီနိုင်သလို ပျော့ပျော့ကြီးနဲ့စားလို့မကောင်းပါဘူး။ အနှစ်အကာကပ်ပြီး မာမာတင်းတင်းလေးဖြစ်နေမှသာ သုပ်လို့ကောင်း ၊ စားလို့ကောင်းတာပါ ယောင်းရေ။
Related article>>>ပြင်သစ်ကြက်ဥကြော် ကြော်တတ်ပြီလား
၁ – ဆေးဘဲဥကိုအပေါ်က အခွံတွေခွာ ၊ ဓားနဲ့စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားလေးတွေ လှီးပြီး သုပ်မယ့်ပန်းကန်ထဲမှာ ထည့်ထားပါ။
၂ – လှီးပြီးသားဆေးဘဲဥပေါ်ကိုတော့ သံပုရာသီးကို ခပ်ပါးပါးလေးတွေ စိပ်ပြီးညှစ်ချပေးပါ။ (သံပုရာသီးက ညှီနံ့ပျောက်စေတဲ့အသက်မို့ ဆေးဘဲဥအကုန်လုံးအပေါ်မှာ သံပုရာရည်စိုသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်)
၃- ပြီးရင်တော့ အပေါ်ယံကနေ ကြက်သွန်နီ ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွေကို ပါးပါးလှီးထည့်ပြီး ၊ ဆီ ထမင်းစားဇွန်း(၂)ဇွန်း ၊ ကြက်သားမှုန့် ထမင်းစားဇွန်း(၁)ဇွန်းတို့ကို ရောထည့်ပြီး သမအောင် ခပ်ဖွဖွနယ်ပေးပါ။
၄-အရသာမြည်းစမ်းပြီး စိတ်တိုင်းကျသွားပြီဆိုရင်တော့ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ နံနံပင်ကို အပေါ်ယံကဖြူးပြီး အသင့်စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
ကိုယ်တိုင်သုပ်စားတာဖြစ်လို့ ပမာဏရော ၊ အရသာပါ စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်တာမို့ တဝကြီးစားနိုင်မှာပါ။ ချိုချဉ်ငံစပ်အရသာတွေ ရောသမမွှေထားမို့ ခံတွင်းနဲ့ကွက်တိကျပြီး လျှာပေါ်အပီအပြင်စွဲငြိသွားမယ်လို့ အာမခံပါတယ်ယောင်းရေ…
ဆေးဘဲဥသုပျကို ဆိုငျမှာဝယျမစားတော့မှာ ရဲရဲကွီးအာမခံတယျ
ဆေးဘဲဥသုပျတော့ ကွိုကျပါရဲ့ ကိုယျတိုငျသုပျစားတိုငျး ညှီနံ့ကွီးရရနလေို့ ဆိုငျကပဲဝယျစားနရေတုနျးလား?? ဆေးဘဲဥဆိုတာက နရောတိုငျးလိုလိုမှာ အလှယျတကူဝယျယူနိုငျတာမို့ ဆိုငျမှာဝယျစားရတာ တကယျကိုမတနျတာပါ
ကိုယျတိုငျညှီနံ့မရအောငျ သုပျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေးသိထားရငျ ယောငျးတို့ခံတှငျးနဲ့ ကှကျတိကတြဲ့ အရသာကိုဖနျတီးနိုငျသလို ပိုကျဆံသကျသကျသာသာနဲ့ အမြားကွီးစားနိုငျမှာလေ.. ဒီတော့ မငျမငျကနေ ဆေးဘဲဥကို ညှီနံ့မထှကျစဘေဲ အရသာရှိရှိဘယျလိုသုပျရမလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးအဆငျ့ဆငျ့လေးကို ဝမြှေပေးသှားမယျနျော။
Related article>>>ခကျြရ လှယျကူပွီး ထမငျးမွိနျစမေယျ့ ဝကျနံရိုး ကွကျဟငျးခါးသီး ဟငျးခြိုခကျြနညျး
ဆေးဘဲဥသုပျဖို့ ဘာတှေ လိုအပျမလဲဆိုရငျ-
ဆေးဘဲဥသုပျနညျးလေးကို မပွောသေးခငျ ဆေးဘဲဥကောငျးကောငျးလေးရအောငျ ဘယျလိုရှေးခယျြရမလဲဆိုတာလေး အရငျကွညျ့ကွညျ့နျော… ပထမဆုံး ဆေးဘဲဥကိုကိုငျပွီး ခေါကျကွညျ့လိုကျပါ။ အထဲမှာ လှုပျခါမှုမရှိဘဲ ငွိမျငွိမျလေးဖွဈနတေယျဆိုမှ ယူပါ။ အထဲမှာ လှုပျခါနတောမြိုးဆို အထဲကအနှဈတှကေ မခဲသေးတာမို့ ဥကိုခှဲလိုကျတဲ့အခါ အနှဈအရညျတှထှေကျကလြာပွီး စားရတာပိုညှီနိုငျသလို ပြော့ပြော့ကွီးနဲ့စားလို့မကောငျးပါဘူး။ အနှဈအကာကပျပွီး မာမာတငျးတငျးလေးဖွဈနမှေသာ သုပျလို့ကောငျး ၊ စားလို့ကောငျးတာပါ ယောငျးရေ။
Related article>>>ပွငျသဈကွကျဥကွျော ကွျောတတျပွီလား
၁ – ဆေးဘဲဥကိုအပျေါက အခှံတှခှော ၊ ဓားနဲ့စိတျကွိုကျအရှယျအစားလေးတှေ လှီးပွီး သုပျမယျ့ပနျးကနျထဲမှာ ထညျ့ထားပါ။
၂ – လှီးပွီးသားဆေးဘဲဥပျေါကိုတော့ သံပုရာသီးကို ခပျပါးပါးလေးတှေ စိပျပွီးညှဈခပြေးပါ။ (သံပုရာသီးက ညှီနံ့ပြောကျစတေဲ့အသကျမို့ ဆေးဘဲဥအကုနျလုံးအပျေါမှာ သံပုရာရညျစိုသှားဖို့ လိုအပျပါတယျ)
၃- ပွီးရငျတော့ အပျေါယံကနေ ကွကျသှနျနီ ၊ ငရုတျသီးစိမျး ၊ ခရမျးခဉျြသီးတှကေို ပါးပါးလှီးထညျ့ပွီး ၊ ဆီ ထမငျးစားဇှနျး(၂)ဇှနျး ၊ ကွကျသားမှုနျ့ ထမငျးစားဇှနျး(၁)ဇှနျးတို့ကို ရောထညျ့ပွီး သမအောငျ ခပျဖှဖှနယျပေးပါ။
၄-အရသာမွညျးစမျးပွီး စိတျတိုငျးကသြှားပွီဆိုရငျတော့ ကွကျသှနျဖွူနဲ့ နံနံပငျကို အပျေါယံကဖွူးပွီး အသငျ့စားသုံးနိုငျပါပွီ။
ကိုယျတိုငျသုပျစားတာဖွဈလို့ ပမာဏရော ၊ အရသာပါ စိတျကွိုကျဖနျတီးနိုငျတာမို့ တဝကွီးစားနိုငျမှာပါ။ ခြိုခဉျြငံစပျအရသာတှေ ရောသမမှထေားမို့ ခံတှငျးနဲ့ကှကျတိကပြွီး လြှာပျေါအပီအပွငျစှဲငွိသှားမယျလို့ အာမခံပါတယျယောငျးရေ…
Tags: century egg, Chilli, Food, Lime, onion, Recipe, salad, Tomato
ဒီပိတ်ရက်မှာ လည်ဖို့ပတ်ဖို့ ပျော်စရာပွဲလေးတွေ စောင့်ကြိုနေပါပြီ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကာလအတွင်း ဆံသားကောင်းမွန်အောင် ထိန်းသိမ်းနည်း